Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / WOWOW Gold Paper ithawula Holder Wall Mount
umnikazi wamaphepha wegolide wasendlini yangasese usebenzisa le ndawo entsha odongeni ngesikhathi sakho esenza ikhaya lakho libukeke lincane.
Ukwakhiwa kwensimbi okuqinile, i-sus304 ngeke igqwale
Idizayini ebunjiwe ephezulu, izikulufo ezifihliwe
Hlela futhi ukhuphuke ngesinyathelo esisodwa esilula
Ukunikeza ngezinto eziklanywe ngemidwebo kusetshenziswa imininingwane efakwe ngaphansi, lo msizi wethoyilethi wegolide yangasese 4020001BGD ulingana nethoyilethi lakho ukwenza imfashini engapheli. Ukuqedwa kwebronze yethusi ekhanyayo kukhanya futhi kufudumele okungaphelelwa isikhathi.
Yenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 ye-premium-grade, enenye into engu-18/10 ye-chromium / nickel yokuvikela ukuvimba nokugqwala.
Izikulufa ezifihliwe zamukela i-German Fischer nylon ihange isikebhe, akukho monakalo odongeni lwakho obekwe odongeni, okulula ukulufaka, ungabhangqwa kalula nawe umhlobiso wethoyilethi (yonke imishini ekhuphukayo ifakiwe); Isiqinisekiso seminyaka emithathu
Ukuthengiswa okungabizi kakhulu - izindleko ezifanele zesisombululo sekhwalithi ephezulu, ukukhetha okuhle kwendlu yakho yokugezela.
Kulula ukusetha, kufakwa ne-hardware ekhuphukayo.
I-SKU: 4020001BGD Categories: izesekeli, Izinto Zokugeza Tags: Izinto Zokugeza, Igolide elixubile, Wall Mount